Xiaodu သည် အိမ်သုံး စမတ် ဖန်သားပြင် များအပါအဝင် ထုတ်ကုန် အသစ်များ ကိုမိတ်ဆက် ခဲ့သည် - Pandaily
အင်္ဂါ နေ့တွင် Baidu Group ၏ဒုတိယ ဥက္က president ္ဌ ၊ Baidu Life Business Group ၏ အထွေထွေမန်နေဂျာ နှင့် Xiaodu Technology ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Jing Yan သည် စမတ် ထုတ်ကုန် အသစ် ၂ ခုကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။နေ့စဉ် စမတ် ကြံ့ခိုင်ရေး မှန် နှင့် စမတ် ကင်မရာ တီဗီ V75. ထုတ်ကုန် အသစ် များသည် အိမ် အသုံးပြု သူများနှင့် လူငယ် နည်းပညာ အသုံးပြု သူများအတွက် ဖြစ်သည်။
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် စက်တင်ဘာလတွင် Baidu က၎င်း၏ Smart Life Business Group (Xiaodu Technology) သည် လွတ်လပ်သော ငွေကြေး ဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက် လက်မှတ်ရေးထိုး ပြီး ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ ဘဏ္ financing ာရေး ပြီးဆုံး သွားသောအခါ Baidu သည် Xiaodu Technology ကိုထိန်းချုပ် နိုင် ဆဲဖြစ်သည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် သြဂုတ်လတွင် Xiaodu Technology သည် Round B ငွေကြေး ထောက်ပံ့မှု ပြီးဆုံး ခဲ့ပြီး ယွမ် ၃၃ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅. ၂ ဘီလီယံ) အထိရောက်ရှိခဲ့သည်။
Xiaodu သည် မြို့ကြီး များရှိ သုံးစွဲ သူများအား ဤ ထုတ်ကုန်များကို ချက်ချင်း ခံစား နိုင် စေရန် စမတ် လက်လီ အရောင်းဆိုင် အမှတ်တံဆိပ် Lecoo နှင့် မဟာဗျူဟာမြောက် မိတ်ဖက် ပြု ခဲ့သည်။
နေ့စဉ် စမတ် ကြံ့ခိုင်ရေး မျက်မှန်
လက်ရှိတွင် ကြံ့ခိုင်ရေး သည် အမျိုးသားအဆင့် မဟာဗျူဟာ တစ်ခုဖြစ်လာသည်။ Xiaodu ၏အမှတ် တံဆိပ် ခွဲ Tiantian ၏ဒုတိယ ထုတ်ကုန် ဖြစ်သော Tiantian Smart Fitness Mirror သည် မိသားစု ၀ င်များ၏ မတူညီသော ကြံ့ခိုင် မှု လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်း ရန် နောက်ဆုံးပေါ် AI နည်းပညာကို ဂိမ်းကစား နည်း များနှင့်ပေါင်းစပ် ထားသည်။ Mirror ကို မူကွဲ ၂ ခု ပေါ် အခြေခံပြီး ယွမ် ၄၆ ၉၉ နဲ့ ယွမ် ၄ ၁၉၉ အသီးသီး သတ်မှတ် ထားပါတယ်။
ကြေးမုံ သည် လူ့ခန္ဓာကိုယ် ၏အဓိက အရိုး ၁၉ ခုကို ဖမ်းယူ နိုင်ပြီး အသုံးပြု သူ၏ ခန္ဓာကိုယ် လှုပ်ရှားမှုများ ကိုတိကျစွာ ခွဲခြားနိုင်သည်။ အသုံးပြုသူသည် မှန် ရှေ့တွင် လေ့ကျင့် သောအခါ ၎င်း ကိရိယာ သည် အသုံးပြု သူ၏ ခန္ဓာကိုယ် လှုပ်ရှားမှုများ ကိုတစ် ဦး ချင်းစီ ခြေရာခံ နိုင်သည်။ ၎င်းသည် ထိုင်ခုံ ၊ ထိုင် ခြင်း၊ ကွေး ခြင်းနှင့်အခြား သူ များအပါအ ၀ င် လေ့ကျင့်ခန်း အမျိုးမျိုးတွင် အသုံးပြုသူ ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှု များကိုပိုမို တိကျစွာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ စေသည်။
Timely Smart Fitness Mirror (ဓာတ်ပုံ-Source:
ထို့အပြင် မှန် သည် အသက်အရွယ် မရွေး မိသားစု ၀ င်များ၏ ကြံ့ ခို င်မှု လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်း ရန် လူကြိုက်များသော ဂိမ်း များနှင့် ကြံ့ခိုင်ရေး သင်တန်း များကို သိုလှောင် ထားသည်။
စမတ် ကင်မရာ တီဗီ V75
Smart Camera TV V75 သည် ခေါင်းစဉ် တွင် “ ကင်မရာ” အမည် ပါသော ပထမဆုံး စမတ် တီဗီ ဖြစ်သည်။ ယွမ် ၄၉ ၉၉ နဲ့ ရောင်းချ မှာဖြစ်ပြီး တီဗီ အတွင်း ပိုင်းမှာ ဉာဏ် ရည် တု နဲ့ ကူညီ ပေးထားတဲ့ ကင်မရာ တစ်လုံး ပါ ရှိပါတယ်။
Xiaodu Technology ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Jing Yan က “ AI ကင်မရာ များမှတဆင့် တီဗီ များ၏ ၀ န်ဆောင်မှု နယ်နိမိတ် ကိုတိုးချဲ့ ခြင်း သည်ကြီးမားသော တိုးတက်မှု ဖြစ်သည်” ဟု ဟောကိန်းထုတ် ခဲ့သည်။ အနာဂတ္မွာ တီဗီ ေတြ အားလံုးဟာ Smart Camera TV ေတြ ျဖစ္လာ မွာပါ “ လို႔ ေျပာပါတယ္။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Xiaomi TV ES50 2022 ကို MediaTek MT9638 Chip နဲ့ 4K Full Screen နဲ့ တရားဝင် မိတ်ဆက်
တီဗီ မွာ AI ကင္မရာ တပ္ဆင္ ထားၿပီး စမတ္ဖုန္း ေတြ၊ အသံ အကူ ေတြ၊ အေသးစား ဒီဂရီ စတဲ့ အျခား စမတ္ ထုတ္ကုန္ ေတြနဲ႔ ေပါင္းစပ္ ႏုိင္ေအာင္ ေထာက္ပံ့ ေပးထားပါတယ္။ တီဗီ တွင် အိမ် စောင့်ရှောက်မှု စွမ်းရည် များပါ ၀ င်ပြီး အသုံးပြု သူများကို သူတို့ ၏အိမ် အခြေအနေကို အဝေးမှ ကြည့်ရှု ရန်ခွင့်ပြုသည်။
ကိုVivian Xu Jan 26 Jan 26 မှာ Posted
Huawei ရဲ႕ Asia Pacific ရဲ႕ Consumer Business ရဲ႕ ဒုတိယ ဥကၠဌ Ma Xiaoqiang က Huawei P50 အိတ္ ကပ္ ထဲက ပံု တခ်ိဳ႕ကို ထုတ္လႊင့္ ခဲ့ၿပီး အဲဒီ ပံု ေတြထဲမွာ Petal Maps လို႔ေခၚတဲ့ အက္
Tianyan Cha App သည် ရှန်ဟိုင်း ကိုပြသ သည်ဘူတာ Bတွဲဖက် နည်းပညာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်ဘူတာ B၎င်းသည် Shanghai Canhe Culture Communication Co., Ltd. ၏ရှယ်ယာ ပိုင်ရှင် အသစ် ဖြစ်လာသည်။